China Akwụkwọ Straw obere akpa Eco-enyi na enyi Natural Agba Mee Up oschọ Mma Ọhazi factory na suppliers | Changlin
Ihe onwunwe: Akwụkwọ ahịhịa Arọ: 41g
Nha: L51 * W9.5 * H10cm Mmechi: Mkpọchi uwe
Ebe Mmalite: GUA, CN Port: Shenzhen
Advantage: eke ， mmeghari
N'ihi na akwụkwọ kpara ihe, anyị nwere isi ihe abụọ akwụkwọ ahịhịa ahịhịa na raffia. A na-ejikarị ihe abụọ a eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
From ọdịdị, ahịhịa raffia na ahịhịa akwụkwọ yiri ka ọ dị iche, mana ọ bụ naanị n'ọhụụ ahụ, ahịhịa raffia na aka ahụ dị ezigbo mma, mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka mmetụta nke plastik, na ahịhịa akwụkwọ enwere naanị otu aka mmetụ aka, ahịhịa akwụkwọ bụ ihe izugbe zuru oke yana ọnụ ala dị ọnụ ala, ebe ahịhịa raffia nwere oke ike ka mma karịa ahịhịa akwụkwọ, anaghị atụ egwu mmiri, dị ike karị.
Mgbe ahịhịa mpempe akwụkwọ ma ọ bụ mmepụta raffia gwụsịrị ndụ, enwere ike ikewapụ ha na usoro mkpofu ahihia wee zighachi ya na igwe ihe ọkụkụ ka ọ ghaa ma ghọọ ngwaahịa ngwaahịa ndị ọzọ.
Shapedị ahụ adịghị oke nke na ọ dị mfe iburu na nchekwa. Na mgbakwunye, ọ mara mma na pụrụ iche maka unisex iji.
Ihe eji eme ihe bu otu ihe ahu dika aru. Ndi akpa nile bu ihe okike ma zute aquirements nke gburugburu ebe obibi. Nwunye nke di na nwunye bu ahihia di mkpa nke eji emegharia ma chebe ngwongwo n'ime ya.
Osote: Eco-friendly ịchọ mma Bag Ọhazi mkpọchi mkpọchi na Tassel Puller